I-Semalt Expert Uqiniseko olufunekayo Ukukhusela iWebhu kwiHack of Attempts - Nantsi indlela
Kukho iintlobo ezininzi zokuhlaselwa kakubi kwi-intanethi. Abantu abaninzi bajamelana nemisebenziabaninzi bahlaseli kwimini yabo yemihla ngemihla kunye nemisebenzi yabo. Hackers bachitha ixesha elibalulekileyo elizama ukulijongaiindlela ezahlukeneyo abanokuzisebenzisa ukwenza imisebenzi yabo. Ininzi yale ndlela iquka imisebenzi efana nokuhlaselwa kwe-DDOS okanye kweso sizascript. Zonke ezi hlaselo zinesizathu sokuzingca kunye nokuhlupheka okukhulu kubaxhoba.
Ngokuqhelekileyo, abahlaseli bajolise kwiwebhusayithi yakho ngezizathu ezininzi. Ngokuqhelekileyo, banokubaUkuba ulwazi lomsebenzisi njengolwazi lwekhadi lesikweletu okanye kwipaneli yomlawuli. Kwezinye iimeko, i-hacker ingabamba ixabisoulwazi oluvela kwiwebhsayithi ezifana nolwazi lomthengi kunye nokungena kwiintlobo ezibalulekileyo zeenkampani. HackersUnokukhuphisana nokuncintisana okungafanelekanga apho unobuncwane unokuhlawula i-website yakho okanye i-Search Engine Optimisation (SEO) usezingeniiindlela ezahlukeneyo. Ngenxa yoko, kubalulekile ukukhusela inkqubo yakho kubacuki.
uJack Miller, ingcali ekhokelayo iSemalt ,icacisa ngeendlela ezithile ezingakugcina kude nokuhlaselwa kwaba bantu:
Ukukhuselwa kokungena ngemvume okungagunyazisiweyo
Enye yezona zinto ezilula kwi-site yakho ezenza izinto ezinqwenelekayo uzama ukungena ngemvume njengomlawuli.Ngenxa yoko, i-hacker ingazama ukuqikelela amagama aphawulweyo ahlukeneyo ukuze ubone ukuba yeyiphi enye yezo ziwayo ngenxa yokungazi. Ukusebenzisa iiphasiwedi ezikhuselekileyokubalulekile. Amaphasiwedi afana ne-12345 akakhuselekanga kwaye angabonisa i-website yonke kwi-hacker. Ngaphezu koko, akufanele usebenzise iphasiwedikulula kakhulu ukuqagela. Amagama afana negama lomntwana wakho unokuba nokuqikelela ngokupheleleyo umntu onolwazi. Kunoko, hlabanisaabalingani abahlukeneyo ngefom ehlukeneyo.
Le ngcambu efuna ukuphela komsebenzisi. Le nkqubela ibandakanya ukusetyenziswa kwezinyeiifom kunye neenkomfa zendawo oyisebenzisayo, njengefom yobhaliso. I-hack iqhube ikhowudi yokungena kwifom yomsebenzisi equkethe iskripthi. Phezuluukushaya ukungena, iskripthi siqala ukusebenza kwi-server yakho. Ngenxa yoko, i-hacker inokufikelela kuwo wonke umthengi idatha, kubandakanywaIzihluthulelo zomthengi zithatha nayiphi na ixesha ekungeneni kwiwebhusayithi yakho. Ukulungisa le ntsholongwane, udinga indlela yokwenza ikhowudiulwazi malunga neefom zakho ngaphambi kokubondla kwiziko lakho leenkcukacha. Ngenxa yoko, isikripthi asikwazi ukuqhuba kwisiseko sakho sedatha kuba sele sele seleamanyathelo okwenziwe ukuba angenzeki.
Kuzo zonke iinkampani ze-e-yorhwebo, ukhuseleko lwe-cyber luyinkxalabo ephambili xa ifikaku sebenza kwi intanethi. Kukho iinzame ezininzi zokuhlaselwa ngabantu kunye nabantu abanokufuna ukudibanisa iwebhusayithi yakho kwiiwebhusayithi ezininzi. Ukhuseleko lwakhoindawo, kunye nenhlalakahle yabathengi bakho, kuxhomekeka kakhulu kwimisebenzi yakho njengomphathi.